Ny heloka bevava voalohany teto an-tany - Afrikhepri Fondation
7 min mamaky
QNa iza na iza tsy miraharaha ny fandevonan-kanina teo aloha dia tsy afaka milaza mazava ny kofehy ankehitriny, satria ity farany dia tsy hafa afa-tsy ilay zanaky ny taloha. Fotoana ela lasa izay, tsy misy isalasalana ny fisian'ny zanak'olombelona, ​​nandritra ny fotoana ela, nisy heloka bevava tsy nisy teo aloha nanakorontana ny zanak'olombelona, ​​nanohina sy nampihorohoro ny feon'ny fieritreretany noho ny tsininy, herisetra sy tsy fifankahazoana. Izy no nahatonga azy ho rain'ny heloka bevava sy ny famonoana olona eo an-tany.
Ny tantara dia ao anatin'ny fianakaviana. Rahalahy roa nifanditra ary ny iray dia maty novonoina. Ny ankamaroan'ny fivavahana dia nanambara azy io ary ny FIVONDRONAMBEN'NY FIVAVAHANA dia TSY MANAIKY NY IT.
Ao amin'ny Baiboly, (Genesisy 4.1 - 15), namaky izao izahay:
Adama dia nanao firaisana tamin'i Eva vadiny. Bevohoka izy ary niteraka an'i Kaina. Hoy izy: "Namelona lehilahy iray aho noho ny fanampian'ny Tompo." Niteraka an'i Abela rahalahin'i Kaina indray izy. Mpiandry ondry i Abela ary tantsaha i Kaina. Ary rehefa afaka kelikely, dia nanatitra ny vokatry ny tany ho an'i Jehovah Kaina. I Abela kosa nanao azy ho lahimatoa amin'ny ondriny sy ny tavy. Ary Jehovah nankasitraka an'i Abela sy ny fanatiny, fa tsy Kaina sy ny fanomezany. Tena sosotra i Kaina ary nilaza fomba manjombona izy. Ary hoy ny Tompo tamin'i Kaina: “Nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona tarehy? Azo antoka fa hitsangana ianao raha manao tsara. Raha manao zavatra ratsy kosa ianao, dia eo am-baravarana ny ota ary eo aminao ny filany, fa anjaranao ny manapaka azy. " Saingy, hoy i Kaina tamin'i Abela rahalahiny: "Andeha isika hankany an-tsaha" ary, raha tany an-tsaha izy ireo, dia nianjera taminy izy ary namono azy. Ary hoy ny Tompo tamin'i Kaina: Aiza Abela rahalahinao? Namaly izy hoe: “Tsy fantatro. Mpiambina ny rahalahiko va aho? " Ary hoy Andriamanitra: Inona no nataonao? Ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Manomboka izao dia voaozona ianao, voaroaka amin'ny tany, izay nisokatra hisotro ny ran'ny rahalahinao nalatsaka tamin'ny tananao. Rehefa mamboly ny tany ianao dia tsy hanome anao ny loharano rehetra ao aminy. Ho mpandehandeha sy mpandehandeha eny ambonin'ny tany ianao. Hoy i Kaina tamin'ny Tompo: “Ny fanaintainako tsy zaka. Eto ianao dia mandroaka ahy hiala ity tany ity anio. Ho nafenina aminao aho, ho mpivaro-tena sy mpandehandeha eny ambonin'ny tany aho; ary izay mahita ahy dia mahazo mamono ahy. Ary hoy ny Tompo taminy: "Raha misy mamono an'i Kaina, dia hovaliana impito kosa i Kaina" ary nametrahan'ny Tompo famantarana i Kaina mba tsy hamonoan'ny olona mahita azy.
Ao amin'ny Sura 5 (Al Ma'ida, andininy, 27-31), ny CORAN dia milaza amintsika ny zava-misy:
Ary lazao azy ireo marina ny tantaran'ny zanakalahin'i Adama roa. Samy nanolotra sorona; ny an'ny iray dia nekena ary ny iray kosa tsy ekena. Hoy ity iray: "Hovonoiko tokoa ianao". "Allah dia manaiky," hoy ilay iray hafa, "avy amin'ireo mpivavaka tsara ihany. Raha maninjitra ny tananao hamono ahy ianao dia tsy haninjitra ny tanako hamono anao aho satria matahotra an'i Allah, Tompon'izao rehetra izao aho. Tiako ianao handeha miaraka amin'ny fahotana namono ahy sy ny fahotanao, amin'izay ianao dia ho isan'ireo olona amin'ny afo. Toy izany ny valisoan'ireo tsy marina ”. Ny fanahiny no nanosika azy hamono ny rahalahiny. Novonoiny izy ary lasa iray tamin'ireo resy. Avy eo dia nandefa goaika i Allah izay nanomboka nikaoka ny tany mba hanoro azy ny fomba handevenana ny fatin'ny rahalahiny. Hoy izy: “Lozako! Tsy vitako ve ny afaka mandevina ny fatin'ny rahalahiko toa an'ity goaika ity? " Avy eo izy dia nanjary iray tamin'ireo nivoahan'ny nenina.
Fampahalalana lehibe efatra no mipoitra avy amin'ireto lahatsoratra roa ireto: - Zanakalahin'i Adama niteraka ny Baiboly izy ireo; - Ny fanolorana dia ho hetsika mitarika amin'ny famonoana olona; - Lazain'ny Baiboly mazava tsara ny anadahin'izy mirahalahy, i Abela sy i Kaina mpamono olona; - Ny Coran dia tsy manonona anarana ary miantso azy ireo hoe TARANAK'i Adama.
Ny Habil sy Qabil anarana manondro ny mirahalahy ao amin'ny lovam-pampianarana Silamo, dia ny vokatry ny silamo malaza exegesis izay tsy miorina amin'ny CORAN, na ny Mpaminany ny finoana silamo, fa Al Tabari, izay Izy mihitsy aza no nanantona azy tamin'ny andininy ao amin'ny Genesisy voalaza etsy ambony.
Al Tabari (839 - 923) ao amin'ny fanehoan-kevitra boky Coran (Tafsir Al-Tabari) boky ara-baiboly be voataonan'ny exegesis (isra'iliyyat), dia mitatitra ny andinin amin'ny alalan'ny famoronana gadra ny fifindran'ny izay Tsy misy raharaha miaraka amin'ny fanahin'ny andininy ao amin'ny sura 5 voalaza etsy ambony.
Anisan'ireny fifamelezan'ny fifindrana ireny, dia afaka miresaka isika roa:
- "Ibn Humayd nilaza tamintsika, araka ny Salama, araka ny Ibn Ishâq, araka ny manam-pahaizana momba ny Baiboly".
- "Mûssa ibn Hârûn nilaza tamiko, araka ny Amr ibn Hammâd, araka ny As Sadâ, araka ny Abu Malik, araka ny Abu Sâlih, araka ny Ibn Abbâs, araka ny Ibn Mas'oûd, araka ny vondrona naman'ny mpaminany ".
Ibn Kathir (1301 - 1373) ao amin'ny bokiny (Al Bidâya wa Al Nihâya) dia hanamafy io fomban-drazana io ho an'ny silamo mba handray ny anarana Kaina sy Abela.
Ny anton'ny famonoana olona araka ny Baiboly sy ny CORAN
Ho an'ny Baiboly, ny antony manosika ny famonoan'olona dia ny fialonana izay teraka avy amin'ny fanoloran-tena nataon'i Kaina. Ho an'ny fomban-drazana silamo miorina amin'ny asa soratr'i Al Tabari (fa tsy amin'ny CORAN na ny Mpaminany), dia tantara momba ny vehivavy izany. Voalaza fa i Kaina sy i Abela dia teraka kambana amin'ny anabavy iray. Nanapa-kevitra ny rainy fa samy hanambady ny kambana tsirairay. Ny olana ihany, ny kambana amin'i Kaina dia tsara tarehy kokoa noho ny an'i Abela. Tsy nety ilay tolo-dalàna i Cain. Noho izany antony izany dia novonoina ho faty i Kaina. Heloka bevava mahamenatra ...
Inona marina izany
Ny sivilizasiona tokana ihany no tsy maty tamin'ny alalan'ny tantaran'ny olombelona, ​​ny famonoana iray. Famonoana olona toa ny voalohany ao amin'ny tantara ary izay nanelingelina ny feon'ny fieritreretana sy naneho ny fitohizan'ny dian'ny zanak'olombelona eto an-tany: io no NIVORA FIVORIANA ANY NY FIVAVAHANA NILE, izay antsoina matetika hoe EGYPTIAN na FIVORIANA FAHAFATESANA.
Rahalahy roa sy rahavavy roa hanomboka! Faritra goavana iray hizarana !! Lozam-politika, ekonomika ary hegemonic eo amin'ny fitarainana !!! Ity ny tantaran'ny tantara !!!!
Osiris! Seth! Isis! Nephthys! Ireto ny tarehin-tsoratra.
Rahalahy sy ranabavy rehetra, zanakalahin'i Geb, zanakalahin'i Chou (شيث), zanakalahin'i Atum (Adam - آدم). Olombelona daholo izy ireo, ny voalohany fa tsy andriamanitra toa ny nitranga taty aoriana tao amin'ny Ennead of Heliopolis.
Ny CORAN amin'ny teny hoe "TSY MISY ADAM" amin'ny firesahana ireo rahalahy roa ireo, dia tsy afaka ny ho mazava kokoa, satria tsy zanaka lahin'i Adama izy fa ireo zafiny lehibe.
Ny tantara dia manomboka amin'ny fizarazarana faritany eo anelanelan'ireo rahalahy roa sy ny vadiny: Osiris vadin'i Isis sy Seth vadin'i Neftys.
Nahazo tany faran'izay lonaka ny mpivady Osiris, anisan'izany ny sisiny roa amin'ny Ranomasina Mena sy ny lohasaha. Nahatsiaro diso i Seth.
Ankoatr'izany, ny osiris Osis - Isis roa dia notahiana sy sambatra, fa ny an'i Seth sy i Neftys kosa dia nohosorana sy tsy sambatra. Tao amin'ny faritaniny dia tsara fanahy i Osiris sy ny vadiny. Fantatr'izy ireo ny fomba hanomezana sakafo ny fianakaviany, ny fikarakarana azy ireo, ary ny fiakanjony satria lavorary ny tany.
Tsy dia nanan-karena loatra ny faritanin'i Seth. Noho izany ny nahaterahan'ny fifandonana sy ny fifandrafiana izay nivadika ho fankahalana.
Raha averintsika indray ny dikan-tenin'ny boky ara-pivavahana, dia angamba angamba ny manapa-kevitra indray mandeha ary noho ny zava-drehetra nataony ho an'ny DIVINE, saingy indrisy anefa, nolavina i Seth ary namono nahafaty ny rahalahiny tamin'ny nandalovany azy tao amin'ny renirano.
Osiris, niangavy an'i Isis vadiny, ny rahavaviny Neftys (vadin'i Seth) dia voavonjy noho ny tahotra ny fanadinoana miaraka amin'ny fanampian'ny mozika Anubis sy Thoth. Nangoraka izy ary nandeha tany amin'ny mandrakizay.
I Horus zanany lahy no nanjaka nandimby ny tanindrazan'ny razany.
Nifandray tamin'ny ratsy rehetra fantatry ny fireneny i Seth (fanalàna baraka, tsy fanamorana, herisetra, fialonana, fankahalana, halozana, fijaliana, aretina) ary Osiris kosa notahian'Andriamanitra sy ny olona mandrakizay. [Wpdiscuz-feedback id = »Ujezgyf6tx» question = »Ahoana ny hevitrao? »Nisokatra =» 1 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Nataon'i Cherif Lopty
Ny anjara andraikitry ny renin'ity fiarahamonina Afrikana ity
Afrika: Miala amin'ny fitondràna neocolonial
Library Development (PDF)
Henoy ary jereo ny lahatsary Afrikana tsara indrindra (Videos)
Tanjona - Brian Tracy (Audio)